Waxaan jeclaan lahaa inaan ku badalo magaceyga instagram. Sideen u sameeyaa? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku badalo magaceyga barta 'Instagram'. Sideen u sameeyaa?
April 27, 2021 0 comments 403
Dhamaan shabakadaha bulshada dhamaanteen waxaan leenahay a magaca isticmaalaha iyo magaca guud, Haddaba, waa maxay farqiga u dhexeeya midka iyo kan kale? Magaca username waa midka ay asxaabteena u adeegsadaan inay nagu xusaan qoraalada kala duwan, marka lagu daro inuu yahay kan noo ogolaanaya inaan ku aqoonsano qof ama qof kale Marka laga hadlayo magaca dadweynaha, wuxuu na siinayaa joogitaan shabakadda.
Inta badan shabakadaha bulshada ayaa noo oggolaada Magacayaga caamka ah u beddel dhibaato la'aan, Xitaa waxaan ku sameyn karnaa marar badan qaar ka mid ah, taas oo aan ahayn kiiska Instagram, dhinacan waa mid adag, waxay kaliya noo ogolaaneysaa inaan sameyno tiro cayiman oo isbeddel ah oo aad sameyn karto waqti ka waqti. Halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo beddelo magaca isticmaalahaaga.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa soo gal koontadaada Instagram Magacaaga isticmaale iyo lambarka sirta ah ee kuu dhigma, waxaa lagugula talinayaa inaad ka soo gasho taleefankaaga gacanta, xusuusnow in Instagram ay tahay shabakad bulsheed loo sameeyay in laga maamulo inta badan taleefannada gacanta.
Markaad gudaha gasho, naftaada ku hel boggaaga, xulo ikhtiyaarka si aad wax uga beddesho astaanta.
Waxaad ka heli doontaa xulashadan midig sawirkaaga hoostiisa. Markaad doorato qaybtaan, nidaamku wuxuu soo bandhigi doonaa xulashooyin taxane ah.
Waa inaad doorataa ikhtiyaarka loo aqoonsaday inuu yahay "Magaca isticmaale", dhagsii oo tirtir magacaaga hadda jira.
Marka magaca hadda jira la tirtiro, qor magacaaga cusub isticmaalaha.
Waqtigan xaadirka ah waa inaad hubisaa haddii nidaamka Instagram uu oggolaado iyo in kale. Haddii la oggolaado, way kula soo socodsiin doontaa leh shil cagaaran, kani wuxuu ku jiri doonaa dhinaca midig ee magaca cusub.
Waqtigan xaadirka ah waxaad kaliya u baahan doontaa inaad riixdo ku saabsan sheyga aqbalaada, kaas oo ku yaalo qeybta kore ee midig ee shaashadda arjigaaga. Oo sidaasaad u beddeleysaa magacaaga isticmaale.
Waa inaad maskaxda ku haysaa in:
Instagram waxay kuu ogolaaneysaa inaad bedesho magacaaga isticmaale markasta oo aad rabto, dalabku ma saarin nooc kasta oo xaddidan oo ku saabsan dhinacan.
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad isbedelka sameyso username ee Instagram Codsiga ayaa, sidaan kor ku soo sheegnayba, xaqiijin doonaa tan, sababta ayaa ah in la ogaado haddii magaca aad dooratay uu diyaar u yahay arjiga.
Kahor intaadan fulin isbedelka magaca isticmaale, arjiga ayaa ku siin doona talooyin taxane ah oo waxay kuu tilmaami doontaa adiga sharciyada lagu fulinayo magaca bedelaada, waxaan kugula talineynaa inaad si taxadar leh u aqriso qeybtaan
Si la mid ah waxaan ku talinaynaa in ka badan hal xulasho magaca cusub wuu badalayaa, maxaa yeelay sidaan horeyba kuugu sheegnay, nidaamku wuxuu oggol yahay oo keliya beddelka, illaa inta magacan la helayo, haddii aan la helin waa inaad doorataa magac kale.
Marka aad bedesho magaca isticmaalaha, waa inaad maanka ku haysaa taas magacaaga isticmaale kor ayaa loo tixgelin doonaa in la heli karo oo sidaas darteed waa loo isticmaali karaa qof kale, markaa waxaad u badan tahay inaadan dib u soo celin karin.
2 Waa inaad maskaxda ku haysaa in:
Sidee loola wadaagi karaa koox Telegram URL?
Sidee loo dhajiyaa twitter?